हिटरको धेरै प्रयोगले निम्त्याउन सक्छ आँखामा गम्भीर समस्या ! « Lokpath
काठमाडौं । हामी यस जाडो मौसममा शरीरलाई न्यानो राख्न विभिन्न उपायहरू गरिरहन्छौँ।
हिटर र ब्लोअरजस्ता उपकरणहरू यसमा धेरै सहयोगी मानिन्छ, तर के तपाईंलाई थाहा छ, शरीरलाई कृत्रिम ताप दिने यी उपकरणहरूको अत्यधिक प्रयोगले तपाईंको लागि गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ?
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार हिटर र ब्लोअरको तातो हावाको प्रत्यक्ष सम्पर्कले छाला र आँखामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ । कतिपय अवस्थामा, यो हावाले तपाईँको आँखाको लागि गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार हिटरजस्ता उपकरणबाट निस्कने हावाले तपाईँको वरपरको हावामा रहेको ओसिलोपनलाई कम गर्छ । जसका कारण हावा सुख्खा हुन्छ, जसले छाला सुख्खा हुने र चिलाउनेजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
यसबाहेक हिटर वा ब्लोअरको अत्याधिक प्रयोगले पनि तपाईँको आँखामा क्षति पुग्न सक्छ, यसबाट निस्कने हावाले आँखाको ओसिलोपनलाई पनि असर गर्छ, जसका कारण मानिसको आँखा सुख्खा हुने र यससँग सम्बन्धित अन्य समस्या हुन सक्छ ।
यही कारणले गर्दा यस्तो उपकरणको प्रयोग कम गर्न सल्लाह दिइन्छ।
जाडो मौसममा मानिसमा आँखा सुख्खा हुने समस्या बढी देखिन्छ, यसको एउटा कारण हिटर आँखाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु पनि मानिन्छ । आँखा सुख्खा हुँदा या त पर्याप्त आँसु उत्पादन हुँदैन वा आँखालाई लुब्रिकेट गर्न गुणस्तरीय आँसुको अभाव हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आँखा रातो हुने, चिलाउने वा जलन हुने समस्या हुन सक्छ ।
पहिल्यै सुख्खा आँखा भएका मानिसमा कहिलेकाहीँ हिटरको प्रयोगले लक्षण बढी देखिने गर्छ । विशेषगरी कारको हिटरबाट निस्कने हावाले वातावरणलाई सुक्खा बनाइदिन्छ, जसले यस्ता व्यक्तिलाई समस्यामा पार्न सक्छ ।
यी उपकरणहरूबाट निस्कने तातो हावा आँखाको सिधै सम्पर्कमा नआओस् भन्ने कुरामा सधैं ख्याल गर्नुपर्छ। यो थप हानिकारक हुन सक्छ।
यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ :
शरीरमा तातो हावा प्रवाहको प्रत्यक्ष जोखिमबाट बच्नसकनुपर्छ । चिसो वा तातो हावाबाट आँखा बचाउन चश्मा लगाउनुहोस् । शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्नुहोस्।
प्रशस्त पानी पिउनु गर्मीमा मात्र होइन जाडो मौसममा पनि आवश्यक हुन्छ । तरल पदार्थको सेवनले तपाईंको आँखासहित शरीरका सबै भागहरूलाई हाइड्रेटेड राख्न मदत गर्दछ। बारम्बार आँखा झिम्काउने अभ्यास गरिरहनुहोस्। यसो गर्नाले आँखाको कोमलता कायम रहन्छ ।
सुख्खा आँखा कसरी निको पार्ने ?
आँखा सुख्खा हुने समस्या महसुस भएमा ढिलो नगरी राम्रो आँखा चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सामान्य अवस्थामा, यो समस्या केही आँखा ड्रपको मद्दतले सुधार गर्न सकिन्छ।
तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई केही व्यायामहरू पनि सुझाव दिन सक्छ जसले तपाईंको आँखाको सुख्खापनलाई प्रगति हुनबाट रोक्न मदत गर्न सक्छ। आँखा सुख्खा हुने समस्यालाई बेवास्ता नगर्नुहोस् विशेष ध्यान दिनुहोस्, नत्र यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।
प्रकाशित मिति: २०७८,माघ,१३,बिहीवार १४:२९
#हिटरको धेरै प्रयोग